सायन : फेल/पास - साहित्य - नेपाल
सायन : फेल/पास
पुस्तक : छुटेका अनुहार |लेखक : रमेश सायन |प्रकाशक : लिपि बुक्स |पृष्ठ : २५०|मूल्य : ३४५ रुपैयाँ
कृतिभन्दा व्यक्तिको प्रभावमा छ, समकालीन नेपाली साहित्य । प्रकाशनदेखि मूल्यांकन र पुरस्कार वितरणको परिपाटीसमेत वस्तुगत नभएर मनोगत छ । त्यसैले नाम चलेका साहित्यकारले लेखेजति ‘सबै साहित्य र उत्कृष्ट’ ठान्ने अनौठो भ्रान्ति छ । यथार्थमा यो साहित्यबाटै साहित्य हराउँदै गएको स्थिति हो ।
भव्य विज्ञापन र बिक्रीको हाउगुजी जतिसुकै देखाइयोस्, नवलेखनले प्राय: खल्लन अनुभव दिलाइरहेको छ । यस्तो ‘लिटेररी डिप्रेसन’ मा रमेश सायनको गैरआख्यान छुटेका अनुहारले थोरबहुत ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘कन्फेसन’ लाई नै उनले संस्मरणको प्रिय सूत्र बनाएका छन् ।
कोरियामा तीन वर्ष के गरे सायनले ? अन्तिम पाठमा त्यसको जवाफ छ । काम र ‘काम’ शीर्षकमा उनले कोरियाली मालिकको कृषि फार्ममा १६ देखि १८ घन्टासम्म काम गरेको लुकाएका छैनन् । ३० वर्षसम्म श्रम नगरेका उनले फेसबुके दुनियाँबाट ‘डिस्कनेक्ट’ भएर उमेरको साँवा, ब्याज, ब्याजको पनि स्याज तिरेको उल्लेख गरेका छन् । उनको स्वीकारोक्ति छ, ‘देशमा मजसरी शारीरिक श्रम नगरी हल्लिएर बाँच्नेहरुका लागि कोरिया सुधारगृह हो ।’
‘फ्याक्ट’ लेख्ने कि ‘फिक्सन’ ? अधिकांश लेखक फ्याक्टमा फिक्सन, फिक्सनमा फ्याक्ट मिसाउने कलाबाजी गर्छन् । त्यसैले न फ्याक्टलाई पत्याउने माहोल छ, न त फिक्सनलाई । किताबमा सायनका आश्चर्यजनक स्पष्टीकरण छन् । जुत्ता कारखानाको जागिर रुचाउँदैनन् । मोटरसाइकल चलाउन जानेको छु भनेर ढाँट्छन् र ट्याक्टर बेच्ने कम्पनीको फिल्ड अफिसरको जागिर पाउँछन् । त्यसको पोल खुलेपछि रिसेप्सनिस्टमा घटुवा हुन्छन् ।
आफ्नो सहने क्षमता देखेर आफैँ छक्कै पर्छन् । फेरि काकतालीमा ‘ट्याक्टर बेच्ने सर’ मै बढुवा हुन्छन् । माओवादी अपहरणमा पर्छन् । अपहरण त उनका लागि पुरस्कारजस्तो हुन्छ । थप बढुवा पाएपछि अपहरणकारीलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
सायनका संस्मरण सरल भएर पनि भावपूर्ण छन् । घटना, पात्र र परिवेशको छनोट अब्बल छ । बोनम प्रताप नामक साथी आफूले कविता प्रतियोगितामा प्रथम भएबापत पाएको खाम सायनलाई ऋणमुक्त गर्न थमाउँछन् । तुलसी राई नामक पात्र मर्निङ वाक पनि मोटरसाइकलमै जान्छन्, शौचादिका लागि पाखाभित्ता पुग्दा पनि मोटरसाइकलमै कुद्छन् । यसमा करुण हास्य छ, चोटिलो व्यंग्य पनि ।
–फ्याट्ट एसएलसी फेल भएँ ।
–प्रेम त अग्राखको आगो रहेछ । सधैँ रापिलो । झरिलो ।
–मानौँ, प्रेमी चिनी हो, प्रेमिका पानी हो । उनीहरु घुलिरहेका छन् आपसमा ।
–मैले सबभन्दा धेरै सोच्ने कुरा यौन र सपना हो ।
–समयले भन्दा धेरै सपनाले जवान बनाउँछ ।
–म अरुलाई जत्ति नै आफूलाई पनि अविश्वास गर्न सक्छु ।
–भोलि म मरेँ भने पनि म बाँचेको कारण नै मरेको हुँ । मृत्युको जिम्मा पनि मैले लिनुपर्छ ।
सायनको गद्यबान्की फुर्तिलो र चहकिलो छ । ‘फ्री स्टाइल’ उनको लेखनको पुँजी हो । हरफैपिच्छे उनका आनीबानी, प्रेम र जीवन, जिन्दगी र संघर्ष झल्किन्छन् । अनुभवको घान हालेर निबन्धको कलेवर दिने उनको अधिकतम कोसिस छ । पूर्वप्रेमिकालाई १० वर्षपछि भेट्दा कस्तो भयो ? पहिलो सिमकार्डको चारो लिएको तर भाँडो नभएको अवस्था कस्तो थियो ? उनले इमानदारीपूर्वक कन्फेसन गरेका छन् । कतैकतै उनको सत्याग्रह डरलाग्दो पनि छ ।
किताबमा उनले बरु आफैँलाई झूर भनेका छन्, अरु पात्रलाई कतै गलत भनेका छैनन् । किताब पढ्दा लाग्छ, सानातिना घटना नै जीवनदर्शनका धरातल रहेछन् । किताबमा १९ वटा मुक्त अनुभूति छन्, फरक–फरक शीर्षकमा । तर तिनीहरु एकआपसमा जोडिएका छन् । प्रस्तुति औपन्यासिक छ । काव्यको रैथाने स्वाद पनि । निबन्धमा कविता भेटिनु संयोग मात्र होइन, किनभने सायन आफैँमा कवि हुन् । निजी अनुभव भए पनि यसलाई व्यक्तिगत गन्थन मात्रै मान्न सकिँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि सायनका सबै संस्मरण उत्तिकै बलिया छैनन् । कतिपय त पाना थप्न मात्र राखिएजस्ता सामान्य छन् । अति भावुकताको मार पनि खेपेका छन् कतिपय संस्मरणले । तिनलाई छिमल्न सकेको भए किताब अझ सानदार हुन सक्थ्यो । किताबमा दुई संस्मरण छन्, ‘फेल’ र ‘पास’ । संस्मरणकारितामा रमेश सायन फेल भए वा पास ? त्यो पाठकले सजिलै भनिदिने छन् ।
प्रकाशित: पुस ४, २०७५